Dhawunirodha iyo nyowani nyowani yeiyo iOS 10 uye macOS Sierra | IPhone nhau
Dhawunirodha iyo nyowani iOS 10 uye macOS Sierra Wallpaper
Nguva dzese kambani painoburitsa nyowani yekushandisa system, Apple kazhinji inotipa isu hombe nhamba nyowani yemapepa matsva. Mune ese ari maviri iOS 8 uye iOS 9 kambani yakachinja angangoita ese mapikicha ataive nawo parizvino. Asi nekusvika kweIOS 10, zvirinani mubeta rekutanga, isu tangoona ipepuru nyowani, chimwe chinhu icho kambani yakanga isati yambojaira, iyo yaisanganisira kuwanda kwavo.
Pamwe chikonzero nei isu chete tine imwe nyowani nyowani, imhaka yekuti isu tiri mubeta rekutanga uye chinangwa chekambani kuwedzera zvimwe mumabheja anotevera. Sezvo kambani inotanga mabheji matsva, isu ticha tarisa nguva nenguva kana Apple inowedzera mapikicha matsva eedu iPhone, iPad kana iPod touch.
Iyo itsva vhezheni yeOS X, inonzi macOS Sierra, zvakare debuts nyowani Wallpaper, zvakafanana mumatoni eruvara atinogona kuona mune OS X El Capitan vhezheni, Vazhinji vashandisi vangangodaro vaneta zvishoma nezvakawanda zvakafanana.
1 Dhawunirodha iOS 10 Wallpaper
2 Dhawunirodha macOS Sierra Wallpaper
Dhawunirodha iOS 10 Wallpaper
Kutenda kune mushandisi weTwitter @ Hori_42, tobva takusiya iyo yega Wallpaper iyo yekutanga beta yeIOS 10 yatiunzira. Tinokupa iwe mufananidzo mune zvisarudzo zviviri 1204 x 1433 yakanaka kune iyo iPad uye imwe iine 1090 x 1920 resolution yeiyo iPhone.
Dhawunirodha macOS Sierra Wallpaper
Kana iwe usiri kufunga kuisa macOS betas, muActualidad iPhone isu zvakare tinokupa iwe mukana we download macOS Sierra Wallpaper mune zvisarudzo zvakasiyana, zvinosanganisira 4k, kuti igadzirise zvakakwana kune ese maMac zvishandiso izvo kambani inogadzira uye yagadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Dhawunirodha iyo nyowani iOS 10 uye macOS Sierra Wallpaper
Ndatenda, asi sei kurodha pasi, nekuti hapana nzira.
pane mbeva tinya bhatani chairo uye sarudza sarudzo yaunoda
Dombo rekutanga re iPhone 7 Plus rinowanikwa muChina